होमपेज / शुक्रबार / सबैको साझा, सबैको आफ्नो
सबैको साझा, सबैको आफ्नो	28 Jun 2013 शुक्रबार १४ असार, २०७०
दीपेन्द्र लामा	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
रंगकर्मी दयाहाङ राईले २०६८ सालको सुपरहिट फिल्म 'लुट'पछि आधा दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा 'हिरो' खेलिसकेका छन्। तैपनि उनलाई गाउँका ठूलाबडाले सोध्दा रहेछन्, 'तँ ठूलो पर्दामा चाहिँ कहिले हिरो हुन्छस्?' ठूलाबडाले कुनलाई 'ठूलो पर्दा' ठानेका हुन्? दयाहाङलाई थाहा छैन। उनी अनुमानमात्र लगाउँछन्, 'सायद राजेश हमालले खेलेको फिल्मलाई ठूलो पर्दा भन्न खोजेको होला।'पन्ध्र वर्षअघिको समयमा सेलुल्वाइड प्रविधिका फिल्मलाई ठूलो पर्दा र भिडियो प्रविधिलाई सानो पर्दा भन्ने चलन थियो। भिडियो फिल्म देखाउने भृकुटीमण्डप वा हाइभिजन हलहरूमा अलि सानै पर्दा टाँगिएको हुन्थ्यो। सेलुल्वाइड फिल्म चल्ने हलमा चाहिँ भित्ता नै ढाकिने ठूलो पर्दा हुन्थ्यो। त्यतिबेला राजेश हमाल सेलुल्वाइड फिल्ममात्र खेल्थे। तर, अहिले समयले कोल्टो फेरिसकेको छ। राजेश र दयाहाङ दुवै डिजिटल फिल्ममा खेल्छन्। अब पर्दा सानो वा ठूलो भन्ने रहेन। सायद दयाहाङको गाउँका ठूलाबडाहरू पर्दाको यो परिवर्तनसँग परिचित छैनन्।हलभित्र दर्शकको ध्यान नियन्त्रण गर्ने एकमात्र वस्तु यही पर्दा हो, सेतो पर्दा। फिल्म निर्देशकका लागि पर्दा एउटा क्यान्भास हो। उसले साढे दुई घन्टा यसमा रंगीचंगी दृश्य पस्किँदै दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने प्रयास गर्छ।काठमाडौँका सबैजसो हलमा सानै उमेरदेखि फिल्म हेर्दै आएको अनुभवमा के भन्नसक्छु भने यो सेतो पर्दालाई दर्शकले पनि निकै सम्मान गर्छन्। पर्दाको संवेदनशीलतालाई सबैले बुझेको पाएको छु। कहिलेकाहीँ फिल्म रोक्किँदा रिसले कुर्सी तोडफोड गरे पनि हलको पर्दामा क्षति पुर्‍याएको मैले देखेको छैन। बरु कसैकसैले फिल्म चल्दै गर्दा हिरोइनका संवेदनशील अंगवरिपरि रातो लेजर बत्ती घुमाएका चाहिँ छन्। हलभित्रमात्र होइन, स्कुलमा समेत यो सेतो पर्दा टाँगिदा हामी छुकछुके विद्यार्थीहरू संयमित हुन्थ्यौँ। लगनखेलको नमुना मच्छिन्द्र माविमा औद्योगिक शिक्षा पढाउने सरले कक्षा कोठाभित्र पर्दा टाँग्न सुरसार गर्नासाथ हामीमा अनुशासन पलाइहाल्थ्यो। १६ एमएमको प्रोजेक्टरबाट मिक्की माउसका कार्टुन फिल्महरू चल्न थालेपछि कक्षा कोठामा कि त हाँसो गुन्जिन्थ्यो कि मुर्दा शान्ति छाउँथ्यो।फिल्म हेर्‍यो भने बच्चा बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि धेरै नेपाली अभिभावकमा छ। तर, २०४५ सालतिर हामीलाई घरबाट हरेक १५ दिनमा फिल्म हेर्न जनही दुई रुपैयाँ दिइन्थ्यो। स्वयम्भूदेखि पैदलैपैदल रञ्जना, विश्वज्योति, कुमारी र जयनेपाल हल धाउँथ्यौं। एक रुपैयाँको टिकट काटेर सबैभन्दा अगाडिको लहर थर्ड क्लासमा बसेर निधारभन्दा माथिको पर्दामा आँखा तन्काउँथ्यौँ। कलाकार जताजता, हाम्रा आँखा उतैउतै दगुर्थे।हलमा हिन्दी फिल्म हेर्दा लामो पर्दा पूरा ढाकिन्थ्यो तर नेपाली फिल्म देखाउँदा चाहिँ दायाँ–बायाँ दुईतिर केही भाग ढाकिँदैनथ्यो। पछि थाहा भयो, सिनेमास्कोप प्रविधिका हिन्दी फिल्मको 'आस्पेक्ट रेसियो' लाम्चो हुँदोरहेछ भने सामान्य प्रविधिमा खिचिने नेपाली फिल्म चाहिँ साँघुरो। पर्दा पूरै नढाकिँदाको खल्लोपन सधैँ हुन्थ्यो। पछि केही नेपाली फिल्म पनि सिनेमास्कोपमा बने। हिजोआज डिजिटल प्रविधिले यो अन्तर मेटाइसकेको छ।हलभित्र विभिन्न 'क्लास'का दर्शकको उपस्थिति हुन्थ्यो। थर्ड, सेकेन्ड, फस्ट क्लास र स्पेसल अनि माथिल्लो तलामा बाल्कोनी र ड्रेस सर्कल। हैसियतअनुसार दर्शक विभाजित हुन्थे। महँगा टिकट काट्नेहरूलाई सिट पनि लचकदार मिल्थ्यो। तल्लो तलाभन्दा माथिल्लो तलाका ट्वाइलेट सफा हुन्थे। हिजोआज पनि नेपालका धेरै हलमा टिकटअनुसार सुविधा फरक–फरक हुन्छन्। तर, सुविधा फरक–फरक भए पनि यो सेतो पर्दा चाहिँ सबै वर्गका दर्शकलाई एउटै हुन्छ। वास्तवमा हलभित्र सबैको साझा भनेको यही पर्दा हो। यसले दर्शकमा सामूहिकता र समानताको भावना पैदा गरिरहेको हुन्छ। रुढीवादी मान्छेहरू यो सेतो पर्दालाई पनि अंशबन्डा गर्न पछि पर्दैनन्। आशुतोष गोवारिकरद्वारा निर्देशित सन् २००४ को हिन्दी फिल्म 'स्वदेश'मा यसको उत्कृष्ट चित्रण छ। सबै गाउँले खुला ठाउँमा फिल्म हेर्न भेला हुन्छन्। तथाकथित ठूला जातका गाउँलेहरू पर्दाको सुल्टोतिर बस्छन् भने साना जातका गाउँलेहरू उल्टोपट्टि बसेर फिल्म हेर्छन्, अक्षरहरू उल्टो देखिनेगरी। नायक मोहन (शाहरूख खान)ले सबै गाउँलेलाई पर्दाको सुल्टोतिर बसेर फिल्म हेर्न लगाउँछ।हलभित्रको पर्दा कति भयावह हुनसक्छ भन्ने त्रास जगाउन निर्देशक क्वेन्टिन टारान्टिनो फिल्म 'इन्ग्लोरियस बास्टर्ड्स'मा सफल भएका छन्। सन् २००९ को उक्त फिल्ममा हिटलरलाई हलभित्रै हत्या गरिएको काल्पनिक दृश्य छ। हिटलरले आफ्ना दलबलसहित फिल्म हेरिरहेको बेला पर्दामा आगो लगाइन्छ र गोली बर्साइन्छ। आफ्नो रवाफ प्रदर्शन गर्न पटकपटक फिल्मको सहारा लिएका हिटलर फिल्म हेर्दाहेर्दै मारिइन्छ। फिल्मले दर्शकलाई कथाभित्रका पात्रहरूको सुखमा रमाउन र दुःखमा सहानुभूति प्रकट गर्न सिकाउँछ। फिल्ममा दृश्य माध्यमबाट कथा भनिन्छ। कथा भन्नका लागि निर्देशकहरूले विभिन्न मौलिक र प्रयोगात्मक शैली अपनाउँछन्। यसले दर्शकको कल्पनाशीलता र रचनात्मकता फराकिलो बनाउनसक्छ।अहिलेको युग भिजुयल मेडियमबाट लाभान्वित र संक्रमित छ। मान्छेलाई पाइलैपिच्छे 'चित्र वा सांकेतिक भाषा'ले घेरेर राखेको छ। दैनिक प्रयोगमा आउने हरेक 'डिभाइस'मा 'भिजुअल ल्यांग्वेज' प्रयोग गरिएको हुन्छ। कुनै चित्र, तस्बिर, आकृति वा दृश्यलाई बुझ्न र परिवेशअनुसार प्रयोग गर्न 'भिजुअल लिटरेसी' आवश्यक पर्छ। मान्छेलाई यो मामिलामा सक्षम बनाउन फिल्मले पनि सहयोग गर्छ। स्कुलकलेजका 'ब्ल्याक बोर्ड'मा नसिकेका ज्ञान मान्छेले फिल्म हलको 'सेतो पर्दा'मा हासिल गर्नसक्छ। Tweet Leaveacomment Message *
पर्वतीय संग्रहालयमा फिल्म महोत्सवपोखरामा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गरिएको छ। पोेखरा फिल्म सोसाइटी र फिल्म सोसाइटी महासंघ नेपालले महोत्सव गरेका हुन्।	मोडल भनेको मनपर्दैनशिवांगिनी राणालाई मोडल भनेको मन पर्दैन। उनको आफ्नै तर्क छ। भारतीय टेलिभिजन च्यानल एमटिभीको चर्चित कार्यक्रम 'एमटिभी रियालिटी स्टार'मा अभिनय देखाएरै टप फाइभमा परेको दाबी गर्ने उनी आफूलाई अभिनेत्री भनिदिए...	बालुवामा फेसनअमेरिकी फेसन डिजाइनर कोर्ट्नी कारदासियन गएको वर्ष आमा बनिन्। आमा बनेपछि उनको सुन्दरता र फेसन डिजाइनप्रतिको लगावमा कमी आएको हुनसक्ने अनुमान कतिपयले गरेका थिए। तर, अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको समुद्री किनारमा...	'धन्न, आइटम क्विन बनिनँ!'गायिका मौसमी गुरुङको गायन पनि मौसमजस्तै छ। कहिले उनी रिमिक्समा भुल्छिन्, कहिले जिंगलमा झुल्छिन्, कहिले आइटम सङमा अड्किन्छिन्। 'परेलीमा छौ कि कसो', 'चोरेर लग्यो यो मन', 'लाउन त लाइदिएँ माया...	इतिहासबोधी दस्तावेजः वृषभ वधकविताको बस्तीमा नारायण ढकालको घर–घडेरी कहाँ छ बारे अनभिज्ञ छु। तर, नेपाली साहित्यको आख्यान र निबन्धको क्षेत्रमा उनको उपस्थिति दमदार छ। भलै, विश्वसाहित्यको मानचित्रमा नेपाली आख्यान खोज्न हम्मेहम्मे पर्ला। नेपाली...	सुमिनाले छाडिन् फिल्म क्षेत्रनेपाली फिल्म क्षेत्रमा विशेषगरी महिला कलाकारको भविष्य सुनिश्चित छैन। त्यसैले दर्जनौँ फिल्ममा अभिनय गरिसके पनि सुन्दर भविष्यका लागि उनीहरू सदा 'सेफ साइड' खोजिरहेका हुन्छन्। नक्कली 'मिस नेपाल'मिस नेपालमा भिड्ने उमेर अभिनेत्री शुभेच्छा थापाको होइन, उनकी छोरीको भएको छ। तर, १६ वर्षे छोरीकी आमा शुभेच्छा अचेल मिस नेपालमा भिडिरहेकी छिन्। उसो त आफूलाई मेन्टेन गरेकै कारण जवान...	'भुइँचालोले मलाई फाइदा पुर्यायो'फिल्म 'प्रेमगीत'मा गरेको अभिनयका कारण अभिनेता प्रदीप खड्का चर्चाको तापमान वृद्धि गर्न सफल भइरहेका छन् । उनको अभिनयको तारिफ पनि भइरहेको छ । फिल्म 'ठूलो मान्छे'बाट निर्माताका रूपमा यस क्षेत्रमा...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...